Antomotra ny fety : arahi-maso ny entana lany daty | NewsMada
Antomotra ny fety : arahi-maso ny entana lany daty
Fahita hatramin’izay ny fivarotana entana lany daty, indrindra eny amin’ireo mpivarotra amoron-dalana. Tokony ho mandavantaona ny fanaraha-mason’ny tompon’andraikitra azy ireny, fa tsy miandry ho antomotra ny vanim-potoan’ny fety toy izao.
Manapa-kevitra ny minisiteran’ny Varotra sy ny fanjifana (MCC) fa hanara-maso ireo entana lany daty manomboka anio alarobia. Hidina ifotony hitety tsena sy mpivarotra samihafa manerana ny Nosy izy ireo. Araka ny fanambarana navoakany, maro tokoa ny mpivarotra manana eritreritra ratsy, manararaotra ny andron’ny fety hivarotana ny entana lany daty, simba na tsy manara-penitra. Anisan’ny andraikitr’ity minisitera ity ny miaro ny mpanjifa ka nahatonga izao fanaraha-maso izao.
Mba hisorohona ny mpanararaotra, ny mpisandoka, ny mpisoloky, mitondra taratasy famitana iraka mazava sy ara-dalàna avy amin’ny MCC ireo mpanara-maso, ahitana ny anaran’ny mpamita iraka, ny anton-diany, ny toerana alehany ary ny fotoana hanaovany ny asany.
Efa feno eny Andravoahangy, eny Isotry, …
Entana nohafarana avy any ivelany ny ankamaroany, toy ny “pate”, ny biskoy, ny sakafo ambifotsy, ny vokatra avy amin’ny ronono (fromazy, dibera, …), ny sôkôla, sns. Tsy vao izao ny nisian’ny mpivarotra entana lany daty. Efa nahitana azy ireny tokoa teny amin’ny tsenan’Andravoahangy sy Isotry, nanomboka ny faran’ny herinandro lasa teo. Namidy 1.200 Ar ny “pate macaroni” iray fonosana, raha tokony ho 1.800 Ar hatramin’ny 2.400 Ar ny vidiny. Raha ny filazan’ireo mpivarotra, entana avy any amin’ny mpamongady mpanafatra entana any ivelany izy ireny, ary amidin’ny tompony mora amin’izy ireo. Tsara raha mamaky ny soratra milaza ny fe-potoana ihany koa ny mpanjifa.
Tsy tokony amin’izao fotoana antomotra fety izao ihany ny handraisana fepetra mafonja toy izao, fa mila atao mitohy sy tsy tapaka. Ankoatra ny mpivarotra amoron-dalana, tsara arahi-maso koa ireo mpamongady sy mpanafatra entana avy any ivelany.